Mareykanka oo ku dhowaaqay Lacag la siinayo Falastiiniyiinta | Aftahan News
Mareykanka oo ku dhowaaqay Lacag la siinayo Falastiiniyiinta
Ramallah (Aftahannews)- Xoghayaha Arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken, ayaa sheegay in golaha Congaress-ka uu ka codsan doono$ 75 milyan oo dollar oo ah gargaar loogu talo-gakay Falastiiniyiinta ku sugan, kadib xabad joojintii dhawaan la gaadhay ee lagu soo afjaray dagaalkii u dhaxeeyay Israel iyo ururka Xamas.
Blinken, ayaa ku dhawaaqista sameeyey kadib wadahadal uu Salaasadii Ramallah kula gashay madaxweynaha maamulka Falastiin Mahmoud Abbas.
Blinken, ayaa yidhi “Waan ognahay in wareeggii ugu dambeeyay ee colaadda ay calaamad u tahay arrimo intan ka ballaadhan oo ay tahay inaan wax ka qabanno haddii aan ka hortageyno soo laalaabashadeeda, waana taas midda aan ka wada hadalnay.”
Blinken, ayaa Salaasadii sidoo kale ku celiyay in maamulka Biden uu rumeysan yahay in xalka laba dowladood “uu yahay jidka kaliya ee si dhab ah loogu xaqiijin karo mustaqbalka Israel ee dowlad Yuhuud dimoqraadi ah, iyo dabcan, in la siiyo Falastiiniyiinta gobolka ay xaqa u leeyihiin.”
Dibluomaasiga ugu sarreeya Mareykanka, ayaa sheegay in Mareykanku uu dib u furayo qunsuliyadda magaalada Qudus uu ku leeyahay, kadib markii maamulkii hore ee Trump uu xidhay sanadkii 2019-kii.